သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏တန်ဖိုးကိုနားလည်ခြင်း Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဧပြီ 23, 2013 အင်္ဂါနေ့, ဧပြီ 23, 2013 Douglas Karr
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့အားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းရှိအဓိကပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ဖောက်သည်များထံမှသူတို့၏ platform ကိုမြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီလိုသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်ကုမ္ပဏီတွင်ရန်ပုံငွေမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုမ္ပဏီ၏ကြီးထွားမှုသို့မဟုတ်ရောင်းချမှုမှရရှိနိုင်သောဝင်ငွေသို့မဟုတ်အမြတ်အချို့ကိုသီးသန့်ထားရှိရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အဲဒါဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါတို့ဘက်မှဤမျှနည်းသောအားစိုက်ထုတ်မှုအတွက်များစွာတောင်းဆိုနေသည်ဟုသူတို့မတွေးနိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းမှုများအတွက်လျော်ကြေးငွေမရရှိနိုင်သည့်အန္တရာယ် မှလွဲ၍ ဤအလားအလာကိုနားမလည်သောပိုမိုကြီးမားသောရုပ်ပုံလွှာရှိသည်။ သူတို့တွေဟာဒီနေရာကနေသူတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးမယ့်အားထုတ်မှုတွေအတွက်မပေးဆပ်ခဲ့ကြဘဲပြီးခဲ့တဲ့အနှစ် ၂၀ လုံးလုံးကျွန်တော်တို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေအတွက်ပေးဆပ်ခဲ့ကြရတယ်။ အဓိကသက်ဆိုင်သူများနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်အချိန်နှင့်ဂရုစိုက်မှုတို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်အကောင်းဆုံးကွန်ရက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်အတွက်တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်အသုံးချခဲ့သည့်အရင်းအမြစ်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အကောင်းဆုံးဘလော့ဂ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာလျော်ကြေးငွေကိုဘာတွေလဲဆိုတာနဲ့ဆက်စပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး လုပ်နေငါတို့ပြီးသားအရာနှင့်ဆက်နွယ်နေသည် ပြီးပြီ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိသတ်သို့ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုရယူခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ယက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်တန်ဖိုးရှိသည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒီ့ပရိသတ်အတွက်၊ ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ကွန်ယက်ကိုငါတို့အလုပ်အကိုင်တစ်ခုလုံးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားလို့သာတန်ဖိုးရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းခြောက်ခုကို ဦး တည်သွားစေမယ့်ရာခိုင်နှုန်းကိုတောင်းနေတုန်းမှာသူတို့ကဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာရင်းနှီးမြှပ်နှံထားတဲ့ access ကိုတောင်းနေတယ်။
သုည၏ ၅% ရာခိုင်နှုန်း
ကုမ္ပဏီများသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစဉ်အမြဲတန်ဖိုးထားကြသည်၊ အထူးသဖြင့်အွန်လိုင်း။ မည်သူမဆိုအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုကိုမေးပါ၊ သူတို့ကသင့်အားဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသောလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အကြောင်းနှင့်သူတို့၏ထုတ်ကုန်အတွက်ဒေါ်လာသန်းနှင့်ချီ။ ရာပေါင်းများစွာလုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုမကြာခဏပြောပြလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဒေါ်လာသန်းရာချီသောကုမ္ပဏီရဲ့ ၅% ကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကဒေါ်လာ ၅ သန်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သို့ဒေါ်လာ ၅ သန်းထိုက်တန်သနည်း။
ပြproblemနာကသူတို့ဟာဒေါ်လာသန်းရာနဲ့ချီတဲ့ကုမ္ပဏီမဟုတ်ဘူး။ တကယ်တော့ကုမ္ပဏီအများစုမှာလုံးဝကျရှုံးခဲ့သည်။ တိုးတက်လာသောဖောက်သည်အခြေပြု၊ စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ဈေးကွက်ကောင်းကောင်းရှိခြင်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုလက်လှမ်းမီခြင်းမရှိဘဲ၎င်းတို့သည် ၀.၀ ဒေါ်လာတန်သာရှိသည်။ သူတို့ယနေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပေါ်မူတည်သည်။0၏ 5% သည် $0ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကူအညီမပါဘဲဒေါ်လာ0တန် ... သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အကူအညီဖြင့်သူတို့သည် ပို၍ များများဖြစ်ရန်အခွင့်အရေးများစွာရှိသည်။
ရာခိုင်နှုန်းအာမခံချက်မရှိသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အလားအလာနှင့်ဝေးရာသို့ထွက်ခွာခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လျင်မြန်စွာကြီးထွားမှုသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့ ဦး တည်သွားနိုင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ယက်အတွင်းအဓိကသြဇာသက်ရောက်သူတစ် ဦး နှင့်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သူတို့ကကြိုးစားအားထုတ်မှုသည်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုထင်ကြသည်။ ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်ပါ ၀ င်ရန်အီးမေးလ်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ဒီအီးမေးလ်ကကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာယူခဲ့တာကိုသူတို့တန်ဖိုးမထားဘူး။ သူတို့အကြောင်းပြချက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသူတွေကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်လေးစားမှုကြောင့်ပဲ။ ကျွန်တော်တို့ကိုအဲဒီအချက်ကိုရဖို့အတွက်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်။ သူတို့တန်ဖိုးကိုနားမလည်ကြတာကံဆိုးတာပဲ။
ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာမောင်းနှင်နိုင်သည့်သြဇာရှိသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ကုမ္ပဏီ၏ ၅% ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်အလွန်သေးငယ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည်သန်းနှင့်ချီ။ ဝေးကွာသွားနိုင်သည်။ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်းမာသောပမာဏနှင့်အတူလမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အရင်းအမြစ်များ (ဗဟုသုတ၊ ကွန်ယက်၊ ပရိသတ်) ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ကုမ္ပဏီသည်ထိုသန်းပေါင်းများစွာကိုဘယ်သောအခါမျှရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
ငါနှစ်ပေါင်းများစွာစာအုပ်ရေးသားခြင်းနှင့်ရောင်းလိုသောတစ်စုံတစ် ဦး ကဒီကွဲပြားခြားနားသောမမြင်မိပါဘူး။ သူတို့ကထုတ်ဝေသူတစ်ယောက်ဆီသွားတယ်။ ထိုထုတ်ဝေသူတွင်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းစွမ်းရည်ရှိသည်။ ၀ င်ငွေအများစုအတွက်လဲလှယ်ခြင်းအတွက်စာရေးသူနှင့်စီးပွားရေးလုပ်သည်။ ထုတ်ဝေသူကဘယ်တော့မှဒေါ်လာမပေးနိုင်တာကိုအန္တရာယ်ပြုပေမဲ့လည်းအများကြီးလုပ်နိုင်တယ်။ ထုတ်ဝေသူ၏အရင်းအမြစ်များကိုသူတို့မရရှိပါကစာရေးသူအနေဖြင့်မိတ္တူကူးခြင်းကိုဘယ်တော့မျှမစွန့်စားပါ။
အဘယ်အရာကိုတစ် ဦး ဝယ်ယူဆုံးဖြတ်ချက်သြဇာလွှမ်းမိုး?
ဧပြီ 23, 2013 မှာ 10: 14 AM
ထို့အပြင်သင်ပိုမိုလွယ်ကူလေလေ၎င်းကိုမပိုင်ဆိုင်သူများ၏ရှုထောင့်မှကြည့်ရှုရန် ပို၍ လွယ်ကူလေဖြစ်သည်။
ဧပြီ 23, 2013 မှာ 11: 34 AM
ဤသည်အများအပြားအဆင့်ဆင့်အပေါ်ထိုကဲ့သို့သောအလွန်ကြီးစွာသော post တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ပထမ ဦး စွာအေဂျင်စီနှင့်အတိုင်ပင်ခံတိုင်းသည်၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သောတန်ဖိုးကိုပိုမိုနားလည်ရန်နှင့်တန်ဖိုးထားရန်၎င်းကိုဖတ်ရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့ကဒီထက်ပိုကြလိမ့်မယ်
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် start-up တိုင်းသည်သူတို့၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်ရူးသွပ်မှုအားဖြင့်သူတို့၏ပစ်လွှတ်မှုများကိုဖုံးကွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကြီးထွားမှုအားဟန့်တားခြင်းအတွက်ရူးသွပ်သောစွမ်းအားကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။
လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ ကကျွန်ုပ်သည်လူသိများသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတိုင်ပင်ခံတစ် ဦး နှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုလုပ်ငန်းများထဲမှတစ်ခုတည်းကပင်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်သူ့ကိုဒေါ်လာ ၃ သန်းပေးခဲ့သည်။
ကြီးစွာသောသတိပေးချက်အတွက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု = သြဇာအတွက်နောက်တဖန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲဒါကိုအသုံးချပါ။